पाकिस्तान नजिकै भारतले निर्माण गर्‍यो राजमार्ग जहाँ युद्धक विमान अवतरण गर्नेछन्! - Dainik Online Dainik Online
पाकिस्तान नजिकै भारतले निर्माण गर्‍यो राजमार्ग जहाँ युद्धक विमान अवतरण गर्नेछन्!
प्रकाशित मिति : २४ भाद्र २०७८, बिहिबार २ : १५
भारतले पाकिस्तानको सीमा नजिकै पहिलो राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण गरेको छ। यो राजमार्ग निर्माण गर्नुको उद्देश्य युद्धक विमानहरु आकस्मिक रुपमा अवतरण गराउनु रहेको बीबीसीहिन्दीले जनाएको छ।
भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह तथा यातायातमन्त्री नितिन गडकरीले आज पाकिस्तानको सीमा नजिकै रहेको राष्ट्रिय राजमार्ग–९२५ उद्घाटन गरेका हुन्। राजस्थानस्थित पाकिस्तानको सीमाभन्दा ५० किलोमिटर टाढा बाडमेर–जालोर बोर्डरको अडगावा क्षेत्रमा यो विमान अवतरण गर्न मिल्ने राजमार्ग बनाइएको हो।
रणनीतिक हिसाबले पाकिस्तानको खतरालाई मध्यनजर गर्दै यो राजमार्ग बनाइएको विज्ञहरुको बुझाई छ। तीन किलोमिटरको यस राजमार्गमा लडाकु विमानहरु अवतरण गर्न सहज हुनेछन्।
बीबीसीका अनुसार रक्षामन्त्री सिंह, सडक–यातायात तथा राजमार्गमन्त्री गडकारी र चिफ अफ डिफेन्स बिपित रावत वायु सेनाको हरक्युलस सी–१३० विमानमा यो राजमार्गमा अवतरण गरेका थिए।
उद्घाटनमा सिंहले भने,‘सेनाको परिचालन क्षमताको सुधारको लागि राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरणले देशको कयौं स्थानमा आपतकालीन अवतरण गर्ने मैदान विकास गरिरहेको छ। यसले प्राकृतिक विपत्ति आईपर्दा काम गर्न मद्दत पुग्नेछ।’
आज सुखोई–३० एमकेआई युद्धक विमान, एएन–३२ सैन्य विमान, एमआई–१२ र एमआई–५ हेलिकप्टर यस राजमार्गमा आपतकालीन अवतरण गराइएएको थियो। पीटीआईका अनुसार हाल भारतले २७ वटा यस्तै राजमार्ग बनाउन अध्ययन गरिरहेका छन् जहाँ सैन्य विमान अवतरण गर्न सहज हुनेछ।